Ire ahia na oru - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.
Home > Zụ ahịa na Ọrụ
Mbupu karịa mba / mpaghara 100 n'ụwa niile, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10,000 ụlọ ahịa na-ere n'ime ụlọ. Nnukwu Shimge nwere ikike nke ibubata na mbupụ ya. A na-ebuga ngwaahịa ndị dị SHIMGE gaa na mba na mpaghara 100 dị na Eastern Europe, Western Europe, Middle East, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, America, Africa na ndị ọzọ. Ruo ugbu a, Shimge nwere ndị nkesa nkesa mba ofesi 305 kwụsiri ike. Na 2016 naanị, agbakwunyela ndị ahịa 93 na-agbakwunye ma kesaa ya n'akụkụ niile nke ụwa. Storeslọ ahịa azụmaahịa Shimge na-ewu ewu na ụlọ ahịa na ahịa na-ere egbe.
Ụlọ ngosi ngosi ihe ngosi nke Universade Shenzhen
Isi Obodo International Airport nke Beijing
Ọrụ Gorges Atọ ahụ
Laos Vientiane Asia-Europe Na-ezukọ ọnụ ụlọ ndị nwe obodo